၅မိနစ်အတွင်းသွားဂျိုးတွေကင်းပြီးဖြူဖွေးတောက်ပတဲ့သွားလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့| FirstClass
Kiko | 2018/08/01 15:19:36
ကျွန်မတို့ အားလုံးဟာလူအများနဲ့တွေ့ဆုံဆက်ဆံနေကြရပြီးနေ့ စဉ်ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်! ကျွန်မတို့ တွေ့ ဆုံဆက်ဆံနေကြရတဲ့လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးမှာကျွန်မတို့ ရဲ့စကားပြောဆိုမှုနဲ့ကျွန်မတို့ ရဲ့ အပြုံးတွေကအဓိကနေရာမှာ
ရှိနေတယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူး! ဒါ့ကြောင့်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့နေ့ ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ အချိန်၅မိနစ်လောက်အသုံးချရုံနဲ့ နေ့ စဉ်ဘဝကိုအဓိပ္ပါယ်ရှိရှိနဲ့လှပစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါပြီ ……
(၁) မုန့် ဖုတ်ဆိုဒါ(စတီးဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ)
(၂) သွားတိုက်ဆေး ( သင်အသုံးပြုနေကျ)
ပထမဦးစွာ : ပန်းကန်ပြားအသေးတစ်ခုထဲသို့ မုန့် ဖုတ်ဆိုဒါ , သံပုရာသီးတစ်ခြမ်းစာအရည်, သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ် ,အုန်းဆီတစ်ဇွန်း,ပန်းသီးရှာလကာရည်အနည်းငယ်တို့ ကို ထည့်ကာသမအောင်ရောမွှေပါ ……………………
ထို့ နောက် …ထိုအရောနှောကို ငွေရောင်ခဲပတ်စက္ကူတစ်ခုပေါ်တင်၍ သင်၏အပေါ်သွားတွင် တစ်ခုအောက်သွားတွင် တစ်ခု ဖိကပ်ပေးထားရပါမယ်…၃မိနစ်လောက်အကြာတွင်သင်ကပ်ထားသောခဲပတ်၂ခုကိုသင့်သွားများမှဖြုတ်ကာ စပါကလင်ရည်ဖြင့် ပလုတ်ကျင်းလိုက်ပါ………
ငွေကုန်ကြေးကျမများတဲ့အပြင်ဘာနာကျင်မှုမှလဲမရှိ……ဘေးဥပါဒ်လဲကင်းတာမို့ သင် အလုပ်မသွားခင်……ပါတီမတက်ခင်…အင်တာဗျူးမဝင်ခင်…ချစ်သူနဲ့သွားမတွေ့ခင်၅မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြုလုပ်သွားရုံနဲ့ယုံကြည်မှုရှိရှိသွားလာလှုပ်ရှားလို့ ရပြီမို့ ကျားမရွေးပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလေးမို့ လုပ်ကြည့်ကြဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်နော်…………ကျမ်းမာတောက်ပပြီး အညစ်အကြေး ကင်းစင်တဲ့ သွားလေးများရရှိနိုင်ပါစေ……